Chassis Chinja Vagadziri & Vatengesi - China Chassis Chinja Fekitori
DCRS-9800 Nhepfenyuro Yegore Dombo Musoro Rukoko Kugadziridza Chinjana
DCN DCRS-9816 yakakwira performance waya yekumhanyisa chassis switch. DCRS-9816 ine 18 slots, kusanganisira 2 manejimendi slots uye 16 mabhizinesi slots. Iine simba rakawanda rekushandisa, mafeni uye ma module emamojimendi, iyo DCRS-9816 inovimbisa kuenderera nekushanda uye yakazara redundant system. Iyo DCRS-9800 yakateedzana inoshanda kambasi uye data centre network network inodiwa mune zvebhizimusi, zvekutengeserana, uye nharaunda dzevapi vebasa. Chigadzirwa Zvimiro Kuita uye Kukwirisa DCRS-9816 inotsigira inosvika kumax 320 * 10G chiteshi kana ...
CS16800 Nhepfenyuro Yegore Dombo Musoro Rukoko Kugwara Chinja
DCN CS16809 ndiyo yakakosha chassis switch yakagadzirirwa kusangana nezvinodiwa zveumishinari-hwakakosha network neakanyanya kuita, kuwanikwa kwakasarudzika uye kwakanyanya scalability. Iyo CS16809 inoshandira kambasi uye dhata centre network kudikanwa, inotsigira inoshanduka netiweki mutemo kutumirwa, uye inovaka bhizinesi rakatsanangurwa rakagadzirirwa network kune vashandisi Zvimiro uye Zvakasimudzira CLOS Isingavharidzi Architecture CS16809 inoendesa yakakwira CLOS mizhinji-ndege, yakawanda-nhanho switching mapurani, ayo anowana c ...